एक NPC (NPC) के हो? खेल मा एक NPC के हो?
हरेक कम्प्युटरमा खेल वर्ण को एक ठूलो संख्या यसको खण्डमा को पाठ्यक्रम पूरा गर्न सक्छन् छ। कसैले बस, कसैले तपाईंलाई खतरामा हुनेछ, तपाईं कुरा अक्षरहरू केही तपाईं गर्न काम दिन्छु, अरूलाई तपाईं कुराहरू बेच। सामान्य सबैले आफ्नै भाग्य छ। र ती सबै एक सरल कमी द्वारा भनिन्छ - NPCs। यो NPS के हो, यसको लागि खडा छ र यसको लागि के खडा? यो सबै तपाईं यो लेख सिक्न हुनेछ।
को NPC के अर्थ छ?
तपाईं कम्प्युटर गेम को रुचाउनु हो भने, त्यसपछि तपाईं सम्भवत यी वर्ण, जसको लागि तपाईं आफूलाई प्ले गर्न सक्दैन मा धेरै साधारण छन्। तिनीहरूले तपाईंले तिनीहरूलाई बस असम्भव छ नियन्त्रण गर्न विभिन्न तरिकामा तिनीहरूलाई अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्, विश्व मा बस छन्। यस्तो वर्ण NPCs भनिन्छ। यो के हो? PS - यो NPC (नै मूल गैर-नाटक वर्ण रूपमा खडा जो अंग्रेजी NPC, एक संकोचन)। तदनुसार, किनभने यो, र तपाईं लिन सक्दैन यसलाई नियन्त्रण - यो मूल जो कम्प्युटर व्यवस्थापन गर्नेछ एक नायक, रूपमा योजना थियो। र अक्सर जो यो पालना प्रोग्राम कार्यहरू, यसको आफ्नै सिस्टम छ। कहिलेकाहीं NPCs एक वा दुई प्रतिकृतिहरु को मात्र सक्षम छन् र अरू केही गर्न। तर आजको खेल मा विस्तार गर्न, र अब वर्ण केही आफ्नै निष्कर्ष र आफ्नो कार्यहरू केही विभिन्न प्रतिक्रिया गर्न व्यापक कार्यक्रम हो मौका। तर, केही खेलाडीहरूलाई सोध्न सक्छ - सामान्य विरोधीहरूले NPC देखि फरक के छ? गैर-खेलाडी वर्ण, जो आफ्नो शत्रुहरू को त्यहाँ के हो?
शत्रु देखि NPCs विपरीत
, आवश्यक छ कसरी व्यवहार र के के यी गैर-खेलाडी वर्ण हो: त्यसैले, तपाईं पहिले नै NPC को एक सामान्य विचार छ। तथापि, तिनीहरूले अक्सर ती वर्ण तपाईं लड्न छन् जसलाई आफ्नो शत्रुहरू छन् जो समावेश छैन। तिनीहरूले पनि कम्प्युटर नियन्त्रित र कार्य आफ्नै कार्यक्रम छ, तर तपाईं एक शत्रुतापूर्ण तरिका विशेष तिनीहरूलाई अन्तरक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ - त्यसैले तिनीहरू परम्परागत NPCs, NPS भनिन्छ जो आबद्ध छैन। तर यो त्यहाँ NPCs तपाईंलाई शत्रुतापूर्ण हुन सक्दैन भनेर होइन। NPC प्रत्यक्ष शत्रु मा गरिएका के गर्न सक्छ?
उल्लिखित रूप मा, NPC यो आधारित यसको आफ्नै वर्ण, तिनीहरूले सञ्चालन जो मा रजस्टर देखि, धेरै विविध हुन सक्छ। निस्सन्देह, हामी सबैभन्दा सरल गैर-खेलाडी वर्ण कुनै कुरा खेल मा हुन्छ के, एक विशिष्ट कार्य प्रदर्शन गर्ने कुरा छैन भने। तिनीहरूले सधैं तपाईं कुराहरू बेच र सधैँ खोजहरू र यति मा दिनेछु आफ्नो वस्तुहरू खरीद गर्नेछ। तर सबै NPCs तटस्थ छन् - साथै सकारात्मक नकारात्मक NPCs पनि छ। यो पनि गेमप्लेको असर गर्न सक्छ - सकारात्मक NPCs, उदाहरणका लागि, तपाईं छूट के हुनेछ र नकारात्मक तपाईं खतरामा र तपाईं संग सहयोग गर्न इन्कार हुनेछ। केही खेल मा, तपाईं वर्ण को प्रकृति र तिनको मनोवृत्ति खेल संसारमा आफ्नो कार्यहरू फरक हुनेछ। त्यसैले, अब तपाईंले के थाह छ NPCs, साथै यो सधैं तिनीहरूले खेल भर लिन एक बिन्दुमा वितरण गर्ने सरल काठ नायक छ भन्ने तथ्यलाई।
NPCs के हुन्?
तपाईं पनि कसरी यी वर्ण को उद्देश्य कुनै पनि खेलमा हुन सक्छ बुझ्नुपर्छ - तर, पर्याप्त छैन NPC के थाहा। गैर-खेलाडी वर्ण को सबै भन्दा साधारण प्रकार तपाईं जागिर दिनको हुन्छन्। तिनीहरूलाई तपाईंलाई खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ - तिनीहरू सधैँ जवाफ हुनेछ। तिनीहरूले तपाईंलाई लागि नयाँ खोज छन् भने, तिनीहरूले तपाईंलाई यसको बारेमा जानकारी दिन हुनेछ, र अघिल्लो कार्य, तिनीहरूलाई प्राप्त छ जो पूरा भने छन् - तिनीहरू ठीक तपाईं के गर्न के को सम्झना गरिनेछ। तर, गैर-खेलाडी वर्ण अन्य प्रकार छन्। उदाहरणका लागि, यो सामान्य हो व्यापारीहरु छ - यो भनेर अब आवश्यकता वस्तुहरु को एक निश्चित प्रकार, साथै तपाईं ती कुराहरू खरीद बेच्न गर्ने वर्ण हो। तपाईं निको पार्न NPCs पाउन सक्नुहुन्छ, र केही पनि तपाईं शत्रुहरू सामना गर्न मद्दत गर्न सामेल हुन सक्छ - एक किसिम त्यहाँ NPC छन् के। यी NPCs के हो, अब तपाईं पूर्ण तस्वीर छ।
यसलाई गैर-खेलाडी वर्ण, तपाईं कुनै पनि जानकारी, कार्यहरू, वस्तु र यति मा उत्पादन अन्तरक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ कोसँग छ - अब तपाईं के NpC खेल मा बुझ्छु। तिनीहरूले युद्धमा तपाईं छैन आउँछन्, तर स्थिति NPC आफ्नो चरित्र गर्न सामेल जो, बस माथि उल्लेख थियो। अब उहाँले आफ्नो सहायक रूपमा कार्य हो, तर स्थिति उल्टो हुन सक्छ। केही अवस्थामा, NPCs तपाईं मा क्रोधित हुन र आफ्नो प्रत्यक्ष प्रतिद्वन्द्वीको गर्न गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, शहर मा गार्ड अर्डर राख्न र चोरी वा नागरिक आक्रमण भने, त्यसपछि तिनीहरूले तपाईंसँग कुराकानी बन्द हुनेछ, र तपाईं आक्रमण गर्नेछ। सामान्य मा, त्यहाँ विभिन्न परिस्थिति जसमा NPC, तपाईंको सहयोगी परिणत गर्न सक्नुहुन्छ, वा विपरीत, शत्रु हुन्। त्यसैले त्यहाँ रूपमा सरल छैन किनभने तपाईं, तपाईं खेल मा NPCs, त्यसपछि तिमी गलत हुन सक्छ के थाहा लाग्छ भने यसलाई पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ।
अक्सर तपाईं बस पनि तिनीहरूलाई आक्रमण गर्न सक्दैन - सबैभन्दा कम्प्युटर गेम गैर-खेलाडी वर्ण मार्न अनुमति छैन। यो कारणले गर्दा यी नायक कथा र अन्य उद्देश्यका लागि आवश्यक हुनेछ भन्ने तथ्यलाई गर्न गरेको छ, त्यसैले तिनीहरूले नाश गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, समय NPCs आफूलाई पुनःस्थापित संग - तर, केही खेल मा गर्न अनुमति दिएको छ। तपाईं एक नायक मार्न भने, यो सधैंभरि हुने छैन। तर, यस्तो खेल एल्डरले पाण्डुलिपिहरू को एक श्रृंखला रूपमा अपवाद छन् - तपाईं सबै कुनै पनि चरित्र हत्या, आफ्नो बाटो मा पूरा हुनेछ, जो सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले यो नतिजा entail हुनेछ भनेर बुझ्न पर्छ। पहिले, को गार्ड दोश्रो, तपाईंले राम्रो र तेस्रो को NPC, दिनको लाभ गुमाउनु हुनेछ तपाईं तल शिकार हुनेछ, केही अवस्थामा पनि एक खेल तिमी अगाडी विकासको लागि आवश्यक थियो जो एक वर्ण, मार्न यदि अन्त हुन सक्छ षड्यन्त्र।
कसरी मा रगत हटाउन "सीएस: जाओ" को CLI प्रयोग
Dishonored: को बित्दै जाँदा खेल हत्या बिना। Dishonored: कोड को Safes गर्न
Warface मा डन पिट्न कसरी विवरण
जाडो माछा मार्ने गियर र अन्य वस्तुहरू लागि मत्स्य पालन रेखाहरू
Pollack (नुस्खा multivarka) - पकाउने धेरै तरिकाहरू
Gepatoprotektor "Karsil": निर्देशन, गुण, संरचना
को GEF लागि जटिल विषयगत योजना
दर्दनाक टीटी पेस्तोल - रूस लागि विश्वसनीय सुरक्षा
अधिकार र दिवालियापन उत्तराधिकारी को दायित्व। दिवालियापन उत्तराधिकारी - यो हुनुहुन्छ?
आराम आकाश मा भने "UTair" तपाईंलाई: कम्पनी समीक्षा
सेवा "ट्रयाकर" ( "भिखारी") गर्न "Tele2"